ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေး structures များနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
တစ်ဦးကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အသငျသညျရှာကြသည်အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းတူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း။ လူကြိုက်များကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးတရားစီရင်မှုအခြားသူတွေအကြား, Corporation နှင့်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများဆက်ကပ်။ သင်သည်သင်၏ကမ်းလွန်အစီအစဉ်များနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှာကြသည်အရာပေါ် မူတည်. တစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းပေါင်းထားတဲ့အပိုဆောင်းဥပဒေရေးရာ tool ကိုသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဘဏ်အကောင့်များကိုကိုး စား. နှင့်အခြားအဆောက်အဦများသင်တို့အဘို့အညာဘက်သောပြီးပြည့်စုံသောမဟာဗျူဟာတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ဥပမာများနှင့်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များဖြစ်ကြသည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်:
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထိပ်တန်း Entity အမျိုးအစားများ
နေးဗစ် LLC များစွာသောအခြားတရားစီရင်မှု၏ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒကျော်သာလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်းကျနော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုများအတွက်အကြံပြုအများစုသည်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခြားနိုင်ငံများထက်သာလွန်ပြဌာန်းချက်ကြောင့်တစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခု key ကိုရှုထောင့်ပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သည့်အခါအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး (ပိုင်ရှင်) က၏ နေးဗစ် LLC တစ်ဦးရရှိလာတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမှသိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်းထံမှ LLC ၏အတွင်းပိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်းတရားပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်, တရားစွဲသည်။ ယင်းအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက နေးဗစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ကြောင်းက်ဘ်ဆိုက်အပိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
British Virgin Islands ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ကဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီး, ကုမ္ပဏီနှင့်အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာလွှဲပြောင်းရန်နိုင်စွမ်း၏အတွင်းပိုင်းကျင်းပပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှု privacy ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ IBC ရဲ့ကြီးမားတဲ့သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လျှို့ဝှက်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူဒေသခံအခွန်အခများနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) တွင်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးထားပါတယ်။
ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ အဆိုပါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုကြောင့်လူကြိုက်များအဆောက်အဦများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအစသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မြင့်မားသောဘွဲ့ပေးထားပါတယ်။ ဘေလီဇ် Central America မှာတစ်ခုတည်းသောအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ပနားမား IBC ယခုဂုဏ်သရေရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်အတူ Central America မှာတည်ငြိမ်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပနားမားခိုင်မာတဲ့ဘဏ္ဍာရေးလျှို့ဝှက်ပြီးအတော်လေးတည်ငြိမ်စီးပွားရေးကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပနားမား IBC အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြှနျုပျတို့၏ website ၏ဤအပိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။